Vaovao - Fitaovana fandraisam-bahiny iraisam-pirenena momba ny fandraisam-bahiny faha-30 Shanghai EXPO
Orinasa: Shanghai Copak Industry Company LTD
Adiresy: National Exhibition and Convention Center (Shanghai).
No.333 Songze Avenue, Xujing Town, Distrikan'i Qingpu, Shanghai
Vokatra: kaopy PET ho an'ny zava-pisotro, kaopy PET manokana, tavoahangy PET ho an'ny zava-pisotro, tavoahangy PET manokana, vilia taratasy, vilia taratasy kraft sns.
Fotoana: 29-Mar ka hatramin'ny 1st Apr.2021
2021 Ny Hotel Shanghai Exhibition dia ho tonga amin'ny toerana vaovao - National Exhibition and Convention Center (Shanghai). HOTELEX Shanghai dia havaozina ho sehatra lehibe 12: Fitaovana sy kojakoja fikarakarana, kojakoja latabatra, akora mpamatsy sakafo, kafe sy dite, sakafo, zava-pisotro, fanendasana. Fitaovana sy kojakoja manta, Fitaovana sy fitaovana amin'ny gilasy, zava-pisotro misy alikaola, famolavolana sy kojakoja ilaina amin'ny kitapom-batsy, fonosana sakafo sy fikarakarana sakafo ary fampiasam-bola ho an'ny frankizy sy fikarakarana sakafo.
Handray santionany vaovao amin'ny kaopy misy zava-pisotro PET sy tavoahangy fisotro PET sy vilia taratasy ao amin'ity foara ity izahay. Azonao atao ny misafidy izay ilainao ary mangataka teny nindramina tao amin'ny trano fivarotanay.
Ny kaopy PET dia miovaova amin'ny 1oz ka hatramin'ny 32oz, ny lanjany dia azo ahitsy arakaraka ny takian'ny mpanjifa. Nisy santionany naseho nandritra ity foara ity. Azonao atao ny manamarina ny antsipirian'ny kalitaonay, ny mazava ary ny antsipirian'ny nother. Misy santionany maimaimpoana koa. Manohana ihany koa ny fanontana logo, azonao atao ny milaza amin'ny antsipirihany ny antsipiriany rehetra amin'ny anay.
Ny tavoahangin-tsolika PET dia manana safidy maro amin'ny endriny sy ny volony ary ny satrony. Azonao atao ny manamboatra tavoahangy PET miendrika toradroa, tavoahangin-tsolika PET, tavoahangy PET manodidina na endrika hafa. Miovaova ny volan'ny 6oz ka hatramin'ny 32oz. Azonao atao ihany koa ny misafidy loko mangarahara mazava na loko hafa. Ny fanontana logo dia azo ekena. Ny milina fanontana mandeha ho azy dia afaka manonta ny logo anao hatramin'ny loko 6.
Ny vilia baolina dia manana lin liner PE, liner PLA, liner aluminium. Izy ireo dia mety amin'ny sakafo mafana sy mangatsiaka. Azonao atao ny misafidy ny vilia fanaonay mba hamonosana salady, legioma, savony, vary, noddles sns. Misy satroka pl, PP, PET, vita amin'ny taratasy. Azonao atao ny manamboatra ny lovia mety araka ny fampiasana.
Ny sarin'ny seho misy anay: